कसरी गर्यो ओली सरकारले गुमेको जमिन नक्सामा उतार्न ? – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कसरी गर्यो ओली सरकारले गुमेको जमिन नक्सामा उतार्न ?
कसरी गर्यो ओली सरकारले गुमेको जमिन नक्सामा उतार्न ?
यसअघि भारतले नेपालको लिपुलेक जोडेर चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो। नेपाल सरकारले भारतको उक्त कदम खेदजनक भएको बताएको थियो। र कूटनीतिक तवरले नै अगाडि बढ्न आग्रह गरेको थियो। भारतीय सेना प्रमुखले भने नेपाल सरकारले अरू कसैको निर्देशनका चलेको टिप्पणी गरेको थियो।